उत्तर कोरियाली नेता कीमको मृ’त्यु भए के हुन्छ? अर्को किम जन्मेलान्? – korea pati
April 28, 2020 Korea patiLeaveaComment on उत्तर कोरियाली नेता कीमको मृ’त्यु भए के हुन्छ? अर्को किम जन्मेलान्?
सोल-उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता यति बेला सञ्चार माध्यम बाहिर रहेका छन् । उनी कहाँ अनि के गर्दैछन् कसैलाई कुनै जानकारी छैन । विगत दुई सातामा भएका महत्वपुर्ण राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा अनुपस्थित रहे पछि उनी बारे अनेक टिका टिप्पणीहरु बाहिर आउन थालेका छन् । यति सम्म की उनको मृत्यु भइसकेको समेत दावी गर्न थालिएको छ ।
दक्षिण कोरियाले भने उत्तकोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन जीवतै र राम्रो अवस्थामा रहेको दाबी गरेको छ । केही दिनअघि देखि किमको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा संसारभर चलेका विभिन्न अफवाहका बीच दक्षिण कोरियाले आइतबार उनको अवस्था राम्रो रहेको जानकारी दिएको हो ।
सिएनएनसँगको कुराकानीका क्रममा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विदेश मामिला सल्लाहकार मुन चुङ इनले यो विषयमा आफुहरुको दृढ विश्वास रहेको बताए । ‘किम जोङ जीवित र स्वस्थ छन् । उनी अप्रिल १३ देखि उत्तरकोरियाको वोनसन क्षेत्रमा बसिरहेको भनिएको छ । के हुन्छ यदि उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनको मृत्यु भयो भने? अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपिले केहि प्रश्नहरु तथा तिनको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
किमको मृत्यु संसारले कसरि थाहा पाउला?
किम जोङ उनका बुबा तथा उनका हजुरबुबाको मृत्यु उनीहरुको मृत्यु भएको २ दिन पश्चात उत्तर कोरियाली राष्ट्रिय टेलीभिजनले प्रसारण गरेको थियो । उत्तर कोरियामा टेलिभिजन प्रस्तोताले घटना विशेष कपडा लगाउछन् । यदि राज्यका शासकको मृत्यु भएमा कालो कपडा लगाउछन् भने कुनै शुभ समाचार भएमा पिङ्क रंगको कपडा लगाउछन् । अत: यदि ति समाचार वाचकले कालो कपडा लगाएर क्यामरा अघि शोकको भावमा समाचार वाचन गरेमा किमको मृत्युको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
के उत्तर कोरियामा अर्को किम जन्मेलान् ?
जापान कोरिया युद्द पश्चात सन् १९४८ मा स्थापना भएको उत्तर कोरियाले आफुलाई प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भन्दै आएता पनि त्यहाँ शासन गर्ने शैलि भने फरक छ । राजनैतिक शासन पद्दति भएता पनि स्थापना कालबाट नै वर्कर्स पार्टी सत्तामा छ । त्यहाका मानिसमा एकै प्रकारको संस्कार दिएका कारण सत्ताका लागि लडाई हुने सम्भावना कम छ र मानिसले अर्को तानाशाहलाई सजिलै स्वीकार्ने सम्भावना छ ।
किमको उत्तराधिकारी को बन्ला ?
किम जोङ उनका ३ जना छोराछोरी भएको बताईन्छ । छोरा सानै भएका कारण उनलाई सत्ता सुम्पिने मनस्थितिमा किम नरहेको बुझिन्छ । किमका एक भाई छन् जो राजनीतिक गतिविधिमा निस्कृय रहेका छन् । निश्कृय भएका कारण उनलाई पनि शासन सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा किम छैनन् । किमकी बहिनी जो उनकी विश्वास पात्र पनि मानिन्छिन् । उनी किमका महत्वपुर्ण गतिविधिमा निरन्तर सकृय रुपमा सहभागी पनि भईरहन्छिन् । त्यसकारण किम उनलाई अबको शासन सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहान्छन् ।
परिवार बाहिरबाट शासनमा आउने सम्भावना कति?
हालसम्म किम जोङ उनको परिवार बाहिरबाट नयाँ शासक छानिने सम्भावना कम छ । उनकी बहिनी किम जो जोङका श्रीमान को हुन् वा उनी विवाहित हुन् होइनन् पनि नखुलाइएको अवस्थामा यकिन भन्न नसकिए पनि दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरु भने किमकी बहिनीका श्रीमान पनि उच्च पदस्त कर्मचारी भएका कारण केही सम्भावना रहे पनि परिवार बाहिर शासन सत्ता दिन्छन् दिन्नन् भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।
किमको शरिर मरे पछि के गरिन्छ?
किमका बुबा तथा हजुरबुबाको मृत शरिर पनि संग्राहलयमा सुरक्षित गरेर राखिएका कारण किम जोङ उनको शरीर पनि संग्राहलयमा नै सुरक्षित राखिने सम्भावना रहेको छ ।हटपाटीबाट
बिदामा रहेका नेपालीलाई कोरिया ल्याइने, १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन अनिबार्य
कोरियामा ठगहरु होसियार !
August 16, 2020 Korea pati